बहाना छैन पढ्न को लागी। त्यहाँ साँच्चै छन्? | वर्तमान साहित्य
बहाना छैन पढ्न को लागी। त्यहाँ साँच्चै छन्?
त्यहाँ बहाना छन्? किन?
किनभने त्यहाँ कर्मचारीहरू छन् जसले तिनीहरूलाई निरन्तर दिन्छन्। माफ गर्नुहोस् o कारणहरू। ¿O दुबै? पढ्न छैन? यदि हामी हाम्रो जीवन पढ्न बिताउँछौं! Y हामी के चाहन्छौं पढ्नुहोस् निशान खरीदको, नवौं रिपोर्ट गर्नुहोस् खाताहरूको, दशौं अनुवाद? वा सोच्नुहोस् ली यो उस्तै हुन सक्छ सेक्स? आह, सानो शब्द छ कि आकर्षित गर्दछ, हु? निस्सन्देह, यदि हामी राम्रो समीक्षा दिन वा गर्न चाहान्छौं भने हामी विरलै भन्छौं कि हामीसँग समय वा अन्तर छैन। पक्कै पनि हामी सबै सहमत छौं कि कामुक साहित्य, राम्रो, औसत वा खराब, सधैं अनुयायीहरू छन्।
जे भए पनि, ती बहाना हेरौं, जो सामान्यतया उस्तै हुन्छन्। वा कहिलेकाँही तीनिहरू पनि बनाइन्छन्।
1 म संग समय छैन
2 म अध्ययन गर्दैछु र मैले पहिले नै धेरै पुस्तकहरू पढ्नुपर्‍यो
3 म कुनै पनि समाप्त गर्न सक्षम छैन
4 र मैले पढेको कुरा हेर्न
5 किनकि महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो:
म संग समय छैन
La बहाना को बहाना। तर त्यो हेर्न टिभी श्रृंखला त्यो हामी पेन्डि .मा छ हो हामीले त्यो थोरै समय भेट्यौं। मेरो मतलब, यो मलाई लाग्छ हामी यसलाई हेर्न सक्छौं केहीका लागि पनि ती पुस्तकहरूको पृष्ठहरू जसको सूचि समयको अभावमा हराएको छ।
के हामी टेलिभिजनको एक रात जोन स्नो र अर्को साहित्यिक जोन स्नो प्रस्ताव गर्छौं भने? «बह, यो लायक छैन। कुरा यो हो यदि मैले यो श्रृंखला पहिले नै हेरेको छु भने, म किन पुस्तक पढ्न जाँदैछु?।, स्मार्ट (र आलस्य) कर्तव्य मा उत्तर दिन्छ। तर कति पटक हामी सुखद आश्चर्यचकित भएको छ हामीलाई यो चलचित्र भन्दा धेरै मनपर्‍यो वा श्रृंखला? धेरै, सही?
हामी त्यो सानो अलि प्राप्त गर्न सक्छौं। उदाहरण को लागी, "सिंहासन" बाट हामी मध्येका विश्राम हामी हास्य बाट हामी लिन सक्छौं मोर्टाडेलो वा फाइलमेन (कसले मलाई नकार्न सक्छ?) Ulysses जोइस, जो पहिले नै योग्यता छ। र हामी जो यात्रा मा ट्रेन, बस वा मेट्रो हामीसँग बिहानको सपना बाहेक अरू कुनै सम्भावित बहाना छैन। यो उत्तम तरिकामा लड्न सकिन्छ यदि तपाईंसँग छ भने राम्रो कथा हातमा।
जसरी उनीहरू खर्च भएका छन् दस मिनेट को chorras सन्देशहरूमा WhatsApp, तपाईं केहि सरल पढ्न मा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ शीर्षकहरू प्रेस वा एक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकको सानो अध्याय पाठकको। किनकि मोबाइल फोनहरू (यति स्मार्ट र स्मार्ट अहिले उनीहरू पनि छन्) ले बोक्दछन् अनुप्रयोगहरू पढ्ने र उनीहरूका किताबहरू। को आकार fuente छोरा समायोज्य व्हाट्सएपमा, हैन? खैर, यी अनुप्रयोगहरूमा पनि।
म सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्छु म झुक्यो रोमान्स उपन्यास त्रयी र अन्तिम दुई शीर्षकहरूमा मैले तिनीहरूलाई मोबाइलमा पढें। कुनै एनेस्थेसिया, लाज छैन, कवच ती कालो हृदय हामीसँग यो शुन्य छ कहिलेकाँही र ती मोहित काँसाको घोडसवारले मेरो लागि हिउँमा राखिदिए।
म अध्ययन गर्दैछु र मैले पहिले नै धेरै पुस्तकहरू पढ्नुपर्‍यो
निश्चित। यो मेरो लागि थियो उही पढाई त्यो सामान्य भाषाविज्ञान कोर्स फर्डिनान्डको सॉसुर que इत्र वा गुलाबको नाम de उम्बर्टो इको। मानिस, स्विस भाषाविद् र अरू केहि ईटालियन सेमिलोजिस्ट, तर भाषाहरू र उनीहरूको प्रयोगले उनीहरूले थोरै बुझे। यद्यपि सबै चीजसँग हामी यो सिक्छौं भेदभाव खाना देखि पढ्न को लागी। यदि होईन भने, हामीसँग समस्या छ। जे भए पनि, के एउटा कुरा दायित्व हो र अर्को भक्ति। प्रश्न भनेको उनीहरूलाई उत्तम तरिकाले व्यवस्थित गर्नु हो।
म कुनै पनि समाप्त गर्न सक्षम छैन
मेरो शहरमा यसको एक तरीकाले जवाफ दिइन्छ: झूट र बोसो। यदि त्यहाँ राम्रो कथा छ भने, तपाईं पक्कै चाँडै वा पछि यो समाप्त गर्नुहुनेछ। तर तपाईं यो समाप्त। सहमत हुनुहोस् कि तपाईं आफैंलाई ईट्टा जस्तो देखिने कुरा पढ्न जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्न। यसको लागि त्यहाँ समाधान छ: ईट्टा बन्द गर्नुहोस् र अर्को सामग्री खोज्नुहोस्।
यो अर्को बहाना वा कारण विद्यार्थीहरू र ती हुन् म्यानुअल कि सामान्यतया को दंड विचार आजीवन कारावास। ठिकसँग सिद्धान्तमा तपाईले त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्नेछ र अझ धेरै प्रयास गर्नु पर्दछ। के तपाई वास्तवमै राम्रो साहसिक उपन्यास, नाइर वा रोमान्टिक समाप्त गर्न सक्नुहुन्न? वा एक सुन्दर कविताहरु?
म अनुवाद क्सीनोफन, मार्शल वा टोलकिन र उनीहरूले मलाई उनीहरूसँग डायबोलिक ठाने aorists, अपहरणकर्ता निरपेक्ष वा त्यो चट्टान hobbit बोली. तर मैले रमाईलो गरें को स्वाद संग १००० ग्रीक भाडामा लिनेहरू जो घर फर्कन चाहान्थे र सब भन्दा बढि तातो इपिग्राम क्लासिक bilbilitan बाट। अवश्य पनि, म होबिट्सको बारेमा बढी कहिल्यै जान्न चाहन्न।
र मैले पढेको कुरा हेर्न
त्यहाँ सधैं अनस्टिच गरिएकोका लागि पुस्तक हुन्छ। प्रत्येक पल, उमेर वा स्थान को लागी। सबै रंगहरूका लागि: कालो, गुलाबी, पहेंलो, सेतो, इन्द्रेणी ...
म उसलाई मन पराउँछु फुटबल? को umpteenth जीवनी दरार सिफ्ट मूर्तिहरू जस्तो केहि पनि छैन उनीहरूको बारेमा बढि जान्न तपाईलाई धक्का दिनुहोस्। के म मेरो पढ्न आएको छ, जो संग म संग थियो, र संग छ।
म हो भान्छा? त्यहाँ3739 679 XNUMX XNUMX cook कूकबुकहरू, प्रसिद्ध कुक वा शौककर्ताहरू छन्।
म दु: खी, एक अभिभूत, फ्याँकिएको, म आफूलाई सुधार गर्न चाहन्छु? अघिल्लो लाखौं पुस्तकहरू क्युब गरिएको छ। Agesषिहरू, अग्लो र मध्यम लम्बाइका दार्शनिकहरू, प्रसिद्ध र नामविहीन मनोवैज्ञानिकहरू। तपाईको समस्या वा तनाव पनि हराउदैन। तर हुनसक्छ। र तपाईंले ती महान पढ्नुहुनेछ स्वयं सहायता किताबहरू.
र याद गरौं: सपना देख्नेहरू तिनीहरू सधैं पढ्छन्। यदि तपाईं एक हुनुहुन्छ भने तपाईंले कहिले पनि बहाना बनाउनु हुने छैन।
किनकि महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो:
रमाईलो गर्न, सिक्न वा विवेक प्रयास गर्नुहोस्, तर सबै भन्दा रमाईलो गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै बहाना छैन कुनै कारण छैन पढ्न को लागी।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » बहाना छैन पढ्न को लागी। त्यहाँ साँच्चै छन्?
Great महान लेखकहरू संसारले बिर्सेका छन्